Global Voices teny Malagasy » Nikaragoà: Namoaka ny angondrakitra miafin’ny governemanta amin’ny tranga COVID-19 ny vondrona mpijirika Anonymous · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Septambra 2020 6:24 GMT 1	 · Mpanoratra Melissa Vida Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Nikaragoa, Fanampenam-bava, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, COVID-19, GV Mpisolovava
Sary: Max Pixel , nampiasana lisansa CC0 Sehatra ho an'ny Daholobe .
Tamin'ny 17 Aogositra, nanafika ny arsivan'ny Minisiteran'ny Fahasalamana any Nikaragoà ny vondrona mpijirika misandrahaka amin'ny aterineto Anonymous . Nanaporitsaka dosie miisa 400  fa miampy 6.245 ny tranga COVID-19 any Nikaragoà izay tsy mbola fantatry ny besinimaro. Ny mpikambana Anonymous nitonona ny tenany ho Lorian Syrano tao amin'ny Twitter no nanao ny fanambarana .
Namaly tamin-kafanam-po ilay fijirihana tamin'ny alàlan'ny tenirohy #OpNikaragoa  ireo Nikaragoaianina tao amin'ny Twitter. Hatramin'ny nanombohan'ny ny valan'aretina dia efa hita fa tsy nangarahara  tamin'ny angondrakitry ny COVID-19 ny manampahefana ao Nikaragoà sy ny fandavany  tsy hanao fihibohana.
Nanambara  ny Anonymous fa mihoatra 98,80 isanjaton'ny fitiliana nolazain'ny minisitera fantatra no mitondra ny COVID-19 tamin'ny volana May : tranga miisa 1.332 fa tsy 16 araka izay nolazaina akory. Nitohy nandritra ny volana manaraka ny fironana. Hatramin'ny 24 Jolay, hita fa nisy tranga voamarina miisa 6.245 no tsy notaterina tamin'ny vahoaka.
Hita ihany koa fa iray amin'ireo betsaka indrindra  manerantany ny tahan'ny tranga mitondra ny tsimokaretina isaka ny fitiliana, efa ho ny 56 isanjaton'ny  natao fitiliana no mitondra ity tsimokaretina COVID-19 ity. Nanazava tamin'ny antsafa  nifanaovana tamin'ny Confidencial ny tale misahana ny areti-mifindra teo aloha tao amin'ny Minisiteran'ny Fahasalamana, Álvaro Ramírez, fa noho ny fitiliana natao tamin'ireo olona naiditra hopitaly na ireo misy soritr'aretina no nahatonga izany.
Efa nialoha ny fiporitsahana no nitombo ny ahiahy amin'ny fahamarinan'ny angondrakitra COVID-19 ofisialy. Ohatra, nitatitra  ny olom-pirenena mpilatsaka an-tsitrapo mpanaramaso ahitana mpitsabo matihanina, mpikaroka, injeniera, mpikirakira solosaina sy mpaneho hevitra, fa manakaiky ny roapolo avo heny izay betsaka kokoa noho ny angondrakitra nozarain'ny  Minisiteran'ny Fahasalamana ny isan'ny olona ahiahiana fa matin'ny COVID-19.
Ho an'i Álvaro Ramírez, manamafy ny arisiva tafaporitsaka fa misy antony ny nanafenan'ny governemanta ny angondrakitra. Hoy  izy hoe :
… raha niseho io vaovao io izay tonga tao amin'ny lapam-panjakana isan'andro, ary na inona na inona antony, izay tsy ho azontsika mora dia izy ireo (Daniel Ortega sy Rosario Murillo) no nanapa-kevitra ny handainga amin'ny vahoaka, ary nanova ny angondrakitra, ary nametraka angondrakitra samihafa.
Nanamafy ny governemanta tarihin'ny Filoha Daniel Ortega sy ny vadiny ary ny filoha lefitra Rosario Murillo, tamin'ny volana Mey, fa mijaly amin'ny areti-tratra  ny olona fa tsy noho ny COVID-19. Tamin'ny volana May sy Jona, nihamaro  ny tatitra mampiahiahy momba ny fandevenana miafina. Manantena  ilay mpanao gazety Lucydalia Baca Castellón fa hanery tsy ho ela ny governemanta Nikaragoaianina handray “andraikitra sy ho mangarahara” amin'ny resaka COVID-19 ny fepetran'ny fampindramam-bola iraisam-pirenena.
Tamin'ny 16 Aogositra, nanolotra sombiny tamin'ireo dosie tafaporitsaka ny Anonymous:
Miarahaba ny fitondrana jadon'i Ortega. Tokony efa tsy hita teo amin'ny radara isika nandritra ny fotoana kely saingy tsy nitsahatra ny adintsika amin'ny fahalalahana.
Voajirika ny minisiteran'ny fahasalamana Nikaragoaianina (MINSA) ! Ho avy tsy ho ela ny angondrakitra tafaporitsaka
Manondro ny governemantan'i Ortega ho mpanao “jadona jadona” ny Anonymous, tahaka ireo mpanohitra maro ny governemanta, mpaneho hevitra  ary ny fampitam-baovao  Nikaragoaianina, noho ny fomba fitondrany jadona , ny fampiasana sivana  ary ny kolikoly  . Araka ny filazan'ny Vondrona Manampahaizana avy amin'ny taranja maro, nanao heloka bevava amin'ny maha-olombelona  mamely ny mpanohitra ara-politika nandritra ny fitroarana anti-governemanta tamin'ny taona 2018 i Ortega.
Tamin'ny 21 Aogositra, nozarain'ny Lorian Synaro  ilay rohy izay nolazain'izy ireo fa azo trohina ilay angondrakitry ny Minisiteran'ny Fahasalamana Nikaragoaianina iray manontolo sy ireo dosie miisa 400 hafa :
Voajirika ny minisiteran'ny fahasalamana Nikaragoaianina (MINSA)! Tafaporitsaka ny angondrakitra manokana amin'ny taoniny, dosie ary tafaporitsaka ny angondrakitra rehetra! Tsy hijanona ho tsiambaratelo intsony ny laingan'ny governemanta.
Trohy —> https://t.co/e5knY4mw0y 
* Vakio ny lahatsoratra eto ambany
Tsy vao sambany no nikendry ny governemantan'i Ortega ny Anonymous. Nandritra ny taona 2018, taona nisian'ny fihetsiketsehana anti-governemanta sy ny famoretana vokatr'izany, nofoanan'ny Anonymous ny tranokalan'ny fampahalalam-baovao tantanan'ny governemanta  sy ny polisy . Tamin'ny volana Aprily  2020, nikendry ny Banky Foibe Nikaragoaianina, ny fantsom-pahitalavi-panjakana, ny Polisim-pirenena ary ny tranokalan'ny andrim-panjakana hafa mba hanoherana ny fitantanan'ny governemanta ny COVID-19 ny Lorian Syrano. Nividy  rindrambaiko fiarovana solosaina mitentina 916,000 córdobas (manodidina ny 26.295 dolara amerikana) avy eo ny governemanta Nikaragoaianina.
Tamin'ny volana Mey, nanohy  nanakatona ny tranokalan'ny minisiteran'ny governemanta maro ny Syrano .
Nesorina avokoa ny tranonkalan'ny Banky Foibe ao Nikaragoa, ny minisiteran'ny toekarena ary ny UAF ao amin'ny governemanta
Tsy mbola nitatitra  mikasika ireo zava-nitranga ireo ny El 19 Digital, ilay fampitam-baovao nomerika lehibe indrindra manana fifandraisana akaiky amin'ny governemanta na dia betsaka  aza ny tatitra hafa momba ny vaovao farany avy amin'ny Minisiteran'ny Fahasalamana. Tsy namaly ny fanafihana ihany koa ny minisiteran'ny fahasalamana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/09/08/149584/
 CC0 Sehatra ho an'ny Daholobe: https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/cc0/#:~:text=CC0%20enables%20scientists%2C%20educators%2C%20artists,works%20for%20any%20purposes%20without
 dosie miisa 400: https://100noticias.com.ni/nacionales/102532-anonymous-documentos-minsa-coronavirus/
 betsaka indrindra: https://ourworldindata.org/grapher/covid-19-positive-rate-bar
 mpaneho hevitra: https://www.nytimes.com/2018/08/02/opinion/a-dictatorship-is-rising-in-my-country-again.html
 fomba fitondrany jadona: https://www.eiu.com/topic/democracy-index
 heloka bevava amin'ny maha-olombelona: https://gieinicaragua.org/giei-content/uploads/2019/01/GIEI_NICARAGUA_INFORME_EJECUTIVO_vENERO_2019.pdf
 fampahalalam-baovao tantanan'ny governemanta: https://www.forbes.com.mx/portal-del-gobierno-de-nicaragua-sufre-ataque-de-anonymous/
 Tsy mbola nitatitra: https://www.el19digital.com/busqueda/articulos?q=lorian+syrano